Myanmar Health – Page5– Healthy Life Journal
ရန်ကုန်ကလေးဆေးရုံကြီးတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ကလေးကျောက်ကပ်အစားထိုးကုသမှုအောင်မြင်
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ရန်ကုန်ကလေးဆေးရုံကြီးတွင် ၂၇-၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့က ကလေးကျောက်ကပ်အစားထိုးကုသမှုကို ပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်အောင်မြင်ခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်ကလေးဆေးရုံကြီး၊ ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာ ဒေါ်စုစုဒွေးထံမှ သိရသည်။ “ကလေးကျောက်ကပ်အစားထိုးကုသမှုမှာ ကျောက်ကပ်အစားထိုးလက်ခံမယ့် လူနာက မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ပုလဲ(၁)လမ်းမှာနေတဲ့ ဦးနေအောင်၊ ဒေါ်ဌေးဌေးဝင်းတို့ရဲ့ ၁၀ နှစ်သမီး မနန်းယုဝေဖြစ်ပြီး...
အဆိပ်သင့်ဓာတုပစ္စည်း ပါဝင်သဖြင့် သုံးစွဲရန် မသင့်သော အလှကုန်ပစ္စည်း သုံးမျိုး အသိပေးကြေညာ
MEIYONG Seaweed Super Whitening Extra Whitening & Face Lift၊ O-White Extra Set Cream Special Formula (Day Cream+ Night Cream) နှင့် Dr.YANHEE Skin...
အဝလွန်နေသည့် ဒေါ်ဖြူဖြူထံမှ ၃၅ ပေါင်လေးသည့် ဗိုက်ခေါက်ကို ခွဲစိတ် ဖြတ်ထုတ် အောင်မြင်
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အသက် ၆၁နှစ်အရွယ် ဒေါ်ဖြူဖြူ၏ ၃၅ ပေါင်ခန့်လေးသည့် ဝမ်းဗိုက်အဆီကို နေပြည်တော်၊ ဇဗ္မူသီရိဆေးရုံကြီးတွင် Senior Consultant Plastic Surgeon ဒေါက်တာဦးမင်းဇော်အောင် ဦးဆောင်သောအဖွဲ့က ၁၀-၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့က ခွဲစိတ်အောင်မြင်ခဲ့ကြောင်း ဒေါ်ဖြူဖြူက ဂျာနယ်သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။...
မြန်မာလူမျိုးတို့ အဖြစ်များနေသည့် သွေးတွင်း အဆီများခြင်း
ပါမောက္ခဒေါက်တာဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. လူတစ်ယောက်က သွေးတွင်း အဆီများနေသလားဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ ဆရာ။ ဖြေ. သွေးတွင်းအဆီများတာကို သိဖို့က သွေးဖောက်စစ်ကြည့်မှ သိနိုင်ပါတယ်။ သွေးဖောက်စစ်တဲ့နေရာမှာ Fasting ကို စစ်မှရပါတယ်။ Fasting ဆိုတာ ည...
ကလေးဘဝတွင် ဘီစီဂျီကာကွယ်ဆေးကို ကောင်းစွာ ထိုးနှံထားလျှင် အနာကြီးရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ လျော့ကျစေနိုင်
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကလေးဘဝတွင် အဆုတ်ရောဂါ မဖြစ်စေရန် ထိုးနှံရသည့်ဘီစီဂျီရောဂါကာကွယ်ဆေးကို ကောင်းစွာ ထိုးနှံထားလျှင် အသက်အရွယ်ရလာချိန်တွင် အနာကြီးရောဂါ(Leprosy) ဖြစ်နိုင်ခြေ လျော့ကျမှု ရှိကြောင်း ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဖောင်ဒေးရှင်း ဥက္ကဌဒေါက်တာဦးသန်းစိန်က Healthy Life ဂျာနယ်သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။ ဆရာတို့...
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် ကင်ဆာဝေဒနာရှင်တို့အတွက် ကျယ်ပြန့်စွာ ဆောင်ရွက်နေသည့် ဘက်စုံအထောက်အကူပြုဝန်ဆောင်မှု
ဒေါက်တာဒေါ်ဝါဝါမဉ္ဇူ(ဓာတ်ရောင်ခြည်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး ၊ Palliative Care Service၊ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး။ ။ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာ Palliative Care ကို ဘယ်လိုပေးနေတယ်ဆိုတာ သိပါရစေ ဆရာမ။ ဖြေ။ ။ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာကင်ဆာရောဂါနဲ့ ဆေးကုသမှုခံယူနေကြတဲ့ လူနာအားလုံးကို...
ဘီပိုးနှင့် စီပိုးလူနာများကို ဦးစားပေး ကုသနေ သည့် သံစစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း မန္တလေးတွင် ဖွင့်ပြီ
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) မြန်မာအသည်းဖောင်ဒေးရှင်း(မန္တလေး)၏ ဦး ဆောင်မှုဖြင့် သံစစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း မန္တလေးကို ၁-၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့က အဆိုပါ ဆေးခန်းတည်နေရာဖြစ် သည့် အမှတ်ဘီ(၈)၊ သီရိရိပ်သာ(၁)၊ ၃၅ လမ်း၊ ၇၀ နှင့် ၇၁ လမ်းကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့ နယ်၊...
လူနာရှင်၏ ဆုံးဖြတ်ချက် သို့မဟုတ် ဆရာဝန်၏ ဆုံးဖြတ်ချက် (၄)
ပါမောက္ခဒေါ်သန်းသန်းအေး (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) လူနာ (၄)။ ။ ဒေါ်ဆွေဆွေမြင့်ကတော့ အသက် ၇၅ နှစ်ရှိတဲ့ ဆီးချိုရောဂါရှင်တစ်ဦးပါ။ ဆေးရုံကို အဖျားဝင်ပြီး ကယောင်ကတမ်း အော်ဟစ်သောင်း ကျန်းနေလို့ လာပြရတာပါ။ သွေးချိုကတက်၊ အဖျား က ကြီး၊ သတိက...
လူနာရှင်၏ ဆုံးဖြတ်ချက် သို့မဟုတ် ဆရာဝန်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်(၃)
ပါမောက္ခဒေါ်သန်းသန်းအေး (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) လူနာ (၃)။ ။ ဒေါ်သန်းသန်း၊ အသက်က ၅၈ နှစ်ပါ။ အမောဖောက်ပြီး အဖျားလည်းဝင်လာလို့ သူ့ ကို ဆေးရုံတင်ရတာပါ။ လေဖြတ်ဖူးတော့ ရေသောက် ရင်၊ အစာစားရင် မကြာခဏ သီးတတ်ပါတယ်။ သီး...
ပြန်ကောင်းလာတဲ့ သွေးကင်ဆာလူနာတွေက ဘဝတူရောဂါရှင်တွေကို တတ်နိုင်သမျှ ကူညီပေးသွားမယ်
ဒေါက်တာအေးယုစိုး (သွေးကင်ဆာရောဂါရှင်များ ကူညီစောင့်ရှောက်မှုအသင်း တာဝန်ခံ)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. သွေးကင်ဆာရောဂါရှင်များ ကူညီစောင့်ရှောက်မှု အသင်းကို ဘယ်အချိန်က စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသလဲ။ ဖြေ. ဒီ Leukaemia-Lymphoma Society (Myanmar)ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့တာ သုံးနှစ်ကျော်ရှိပါပြီ။ ၂၀၁၃၊ မေလက စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ အစ်မတို့အသင်းက...